June | 2013 | Rev.U Min Lwin
ချမ်းသာကြွယ်ဝရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဝိညာဉ်ရေးအချက်
Posted by ဦးမင်းလွင် on 24/06/2013
သင်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်က တန်ခိုးပေး ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတန်ခိုးတော်ကို ခံစားဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်များကို အခုတင်ပြပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြွယ်ဝချမ်းသာဘို့ ဆိုတာဟာ ကောင်းကင်ဘုံ အဖဘုရားသခင်အတွက် အလွန်အရေး ကြီးပါတယ်။ ဆာလံ ၃၅း၂၇ ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကျွန်၏ ချမ်းသာ တိုးပွားခြင်းအကြောင်းကို နှစ်သက်သော ထာဝရဘုရားသည် ဘုန်းကြီးပါ စေသတည်း။ (ဆာလံ ၃၅း၂၇)
ယနေ့ လောကကြီးကို ကြည့်လိုက်ရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ မိမိကို ကျော်လွန် ချမ်းသာသွားမှာကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် တပည့်တွေ၊ ကျွန်တွေက မိမိထက် ကျော်သွားကြတယ်ဆိုရင် သမ္မာ အာဇီဝနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လို့တောင် ထင်မြင်ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ဟာ မိမိရဲ့ကျွန်ဖြစ်သူတွေကို ချမ်သာကြွယ်ဝဘို့ မျှော်လင့်နေတယ်၊ တောင့်တနေတယ်၊ နှစ်သက်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
ဒီကျမ်းပိုဒ်ကို မြင်လိုက်တော့ တစ်သက်လုံး ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်မှုနဲ့ နေလာတဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တောင်မှ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို မျှော်လင့်တောင့် တမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြွယ် ဝမှုကို မြင်ရင် ဘုရားသခင်က ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် ဘုရားသခင် ကို ကျေနပ်မှု၊ ဝမ်းမြောက်မှုတွေ ပေးချင်လို့ အဲဒီလို တွေးမိတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်ကြီး ရှင်ယောဟန်သည် သူကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲဒုက္ခ အမျိုးမျိုးကို ခံစားရသော်လည်း တပည့်သားဖြစ်သူတို့ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာစေရန် ဆုတောင်းပေးနေသူဖြစ်သည်။ ၃ယော ၁း၂ တွင် ရှင် ယောဟန်၏ ဆုတောင်းချက် တစ်ချက်မှာ
“အချင်းချစ်သူ၊ သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ကောင်းစားသကဲ့သို့ သင်သည် အရာရာ၌ ကောင်းစားခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်း ရှိမည့်အကြောင်း ငါဆုတောင်း၏” (၃ယော ၁း၂)
ဟုဆိုကာ သူ၏ ယုံကြည်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးနေသော သူ၏ ဆုတောင်းချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ငရဲမှ ကယ်ပေးရန် ကြွဆင်းလာသော သခင်ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့ထံ မှ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို ဖျက်ဆီးဖယ်ရှားရန် ဘုရားသခင်က ဘိသိတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းမူကား ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှာ ငါ့ ကို ဘိဿိတ်ပေး တော်မူပြီ။ ကြွေမွသော သူတို့၏ အနာကို ပျောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဘမ်းသွား ချုပ်ထားလျှက်ရှိသောသူတို့အား လွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်၊ မျက်စိကန်းသော သူတို့အား ပြန် မြင်ခြင်းအကြောင်းကို ပြစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဆင်းရဲခံရသောသူတို့ကို ကယ်မစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့ကို စေ လွှတ်တော်မူပြီဟု လာသတည်း။ (လုကာ ၄း၁၈-၁၉)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ အထူးပြုသောသူများကို လိုင်းတားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဆင်းရဲသားများ နှင့် အားနည်းသူများအားလုံးကို အထူးပြု ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးမှာကတည်းက ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာ အာဒံနဲ့ဧဝ အတွက် လိုအပ်ချက် မရှိအောင် ဖန်ဆင်းထား တာကို တွေ့မြင်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဒံနဲ့ ဧဝမှာ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ အားနည်းချက်တွေ မရှိအောင်ဖန်ဆင်းထားတာမို့ ဘုရားသ ခင်ရဲ့ ဘာသာစကားမှာ ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာ ရှိမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာ ဘုရား သခင်ရဲ့ အကြံအစည်တော်ထဲမှာ ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ လူတို့ရဲ့ အတ္တတရားနဲ့ မနာခံမှုဆိုတဲ့ အကြောင်း တရားထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဘုရားသခင် ဟာ ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ အားနည်းသောသူတွေကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်သော ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲခြင်းကို မုန်းတီးသောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ နီးကပ်ဘို့ ဆိုပေမဲ့ အချို့သောသူတွေဟာ အဲဒီဆင်းရဲ ဒုက္ခကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကြောခိုင်းသွားတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အဲဒါကို ကြေနပ်ပျော်ရွင်နေမယ် ထင်ပါသလား။ သူ့ကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လာရင် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကို ပိုမို ထင်ရှားစေတာကြောင့် ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်သော အခါမျှ သူ့ကို ယုံကြည်သော သူတွေကို ဆင်းရဲတွင်း သို့ မသက်ဆင်းစေချင်ပါ။ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ရဲ့လူတွေကို အမှန်တကယ် ချမ်းသာကြွယ်ဝစေချင်တယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲခြင်းကို ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် တိုက်ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင် ယုံကြည်သူတွေ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲနေကြတာလဲ။ ယုံကြည်သူတွေ ဘာကြောင့် အားနည်းနေရတာလဲ။ ဘာကြောင့် ယုံကြည် သူတွေရဲ့အလို မပြည်စုံနိုင်ရကြတာလဲ။ အဲဒီမေးခွန်းတွေအ တွက် အောက်ပါကျမ်းချက်တွေက ကျွန်တော်တုိ့ကို အဖြေပေးနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း ရဲ့ သော့ချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်နှင့် အကျွမ်းဝင် (ယောဘ ၂၂း၂၁)
ဘုရားသခင်နှင့် အကျွမ်းဝင်၍ မိတ်ဿဟာရဖွဲ့လော့။ ထိုသို့ပြုမှ ကောင်းစားခြင်းသို့ ရောက်ရ လိမ့်မည်။ (ယောဘ ၂၂း၂၁)
ချမ်းသာကြွယ်ဝဘို့အတွက် ဘုရားသခင်နဲ့ အကျွမ်းဝင်ရမယ်ဆိုပြီး ကျမ်းစာက ပြောတဲ့အခါ လူတွေအတွက်ကတော့ ရယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်နေ မယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ ဘာ သာရေနဲ့ စီးပွားရေးကို ခွဲခြားထားကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်နေချိန်မှာ သူတို့ကို ဘုရားတွေ၊ တရားတွေ ပြော တာကို သူတို့ လက်ခံနိုင်ဘို့ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်ရင် ဘုရားသခင်နဲ့ဘဲ မိတ်သဟာရဖွဲ့တဲ့ နောဧဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝ ဘို့ထက် ဘုရားသခင်နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းရတဲ့ ဘဝကို ပိုမို နှစ်သက်တာကြောင့် လူတွေ ဟားတိုက်လှောင် ပြောင်ခံရတဲ့ လမ်းခရီးကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ပါတယ်။ ရေလွှမ်းမိုးပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နောဧတို့ မိသားစုများသာ ကျန်ခဲ့ တာကြောင့် သူတို့ဟာ အရာခပ်သိမ်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ မွေ့လျော် ပြီး ကိုယ်တော်နဲ့ လျှောက်လှမ်းခြင်းမှာ ရတဲ့ အကျိုးတရားပါ။ ကျမ်းစာမှာ အဲဒီလို လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အာဗြဟံ ဆိုရင်လဲ ဘုရားခေါ်သံကြားလို့ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း အနည်းငယ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့ ရပေမယ့် မကြာခင်မှာ မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင် ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာဦး အခန်းကြီး (၁၃)မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ မွေ့လျှော်ခြင်းရဲ့ အကျိုးတရားတွေပါ။
သင့်အိမ်မှ ဒုစရိုက်ကို ပယ်ရှားလျှင် ရွှေကို မြေမှုန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ သြဖိရရွှေကို မြစ်၌ရှိသော ကျောက်စရစ်ကဲ့ သို့၎င်း၊ သိုထားရလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် သင်၌ ရွှေရတနာ၊ သင်သုံးရသော ငွေဘဏ္ဍာဖြစ် တော်မူလိမ့်မည်။ (ယောဘ ၂၂း၂၄-၂၅)
ဒါကတော့ တော်တော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဘဝအသက်တာမှာ ဘုရားသခင်က ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို ပေးချင်သော်လည်း အတားအဆီးဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတို့ရဲ့ အသက်တာထဲမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ရခြင်းဟာ ပထမဆုံး လူသားဖြစ်တဲ့ သူတွေရဲ့ မနာခံမှုတွေ အဓိက ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီမနာခံမှုကို ကျမ်းစာက ဒုစရိုက်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဒုစရိုက်တရားက လူတွေရဲ့ အသက်တာ ထဲကို ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ ဆွဲခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။
စစ်သူကြီး ယောရှုဟာ အလွန်ကြီးမားခိုင်ခန့်တဲ့ မြို့ရိုးကြီးနဲ့ နေတဲ့ ယေယိခေါမြို့သားတွေကို ဘုရားသခင်က အနိုင်ယူအောင်မြင်ခွင့်ကို သက်တောင့် သက်သာနဲ့ ရရှိခဲ့ပေမဲ့၊ သေးငယ်လှတဲ့ အာဣမြို့ကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့ မအာင်မြင်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုသာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်က ဒုစရိုက်အမှုပြုပြီး ပစ္စည်းအချို့ ခိုးယူထားတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားသခင်က အကြောင်း ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ရှင်းပြီးတော့မှဘဲ ဘုရားသခင်က အောင်မြင်မှုကို ရရှိ ခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှ စီးပွားရေးလုပ်ရတာ၊ အောင်မြင်နိုင်မယ်။ စီးပွားဖြစ် ထွန်းနိုင်မယ်လို့ တွေးခေါ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီကိစ္စက တော်တော်လေး ခက်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ရေသာခို အချောင်လိုက်ပြီး ခိုးဝှက်ပြီးတော့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို တောင့်တ နေကြပါတယ်။ အသက်တာ ထဲမှာ ဒုစရိုက် ရှိနေသ၍ ဘယ်သောအခါမျှ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ အဲဒီလို အောင်မြင်ဘို့ မျှော်လင့်နေသူတွေကို ဘုရားသခင်က ဘယ်သောအခါမျှ ကောင်းကြီးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် သင်က မေးမြန်းပါလိမ့်မယ် အချို့သောသူတွေ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်လျှက် အောင် မြင်ချမ်းသာနေသူတွေက ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး မေးမြန်လာ ခဲ့ရင်တော့ ထိုသူတို့၏ အောင်မြင်ခြင်းမှာ အချိန် ကာလ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သောအခါမျှ အောင်မြင်ကြွယ်ဝလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ယောသပ်ဟာ ဘယ်သောအခါမျှ ဒုစရိုက်ကို မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ သူ့လက်မှာ ကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်ပေမဲ့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားပါဘူ။ သခင့်ရဲ့ ဇနီးက သွေးဆောင်မှု ပြုတဲ့ အခါမှာလည်း အဲဒီအထဲမှာ မြုတ်မသွားဘဲ လွတ်အောင် ရုန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘုရားသခင်က ဒုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့ ယောသပ်ကို ဒုတိယ ရှင်ဘုရင် ရာထူးကို ခံစားခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အပြစ်တရား (ဒုစရိုက်) ကိုရှောင်ရှားတဲ့ သူတွေကို ဘုရားသခင်က ပေးသနားတော်မူတဲ့ အလွန် ထူးခြားကောင်းမွန် တဲ့ ဆုလဒ် သရဖူကြီးပင် မဟုတ်ပါလား။ အသက်တာ တွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော် တန်ခိုးဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု တန်ခိုးကို ခံစားနိုင်ကြပါစေ။ (အာမင်)
မှတ်ချက်။ ။ ဤဆောင်းပါးသည် ကယ်တင်ခြင်း ရပြီးသော်လည်း အသက်တာပိုင်းတွင် အားနည်းသူများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 15/06/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဖခင္.	Leaveacomment
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သားသမီး (၄) ယောက်ရဲ့ ဖခင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင် မဖြစ်ခင်ကတော့ ဖခင်ဆိုတာ ကိုယ့်ကို စည်းကမ်းတွေနဲ့ အတင်းကျပ် ထားတဲ့သူ၊ အရိုက်ကြမ်းတဲ့သူ၊ အတင်းတွန်းတဲ့သူ ဆိုပြီး မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ချက်ပြုတ်၊ လျော်ဖွတ်၊ ပြုစုပေးတဲ့ အမေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် လိုက်ရင် အဖေ့ကို အမှတ် ပေးလို့မရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘခင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီးတော့ သားသမီးတွေကို ကြည့်ရှုရင် ဖခင်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို နားလည်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီခံစားချက်ကလေးကို ကဗျာ တစ်ပုဒ်လို ချရေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ကဗျာဆရာမဟုတ်လို့ အစဉ်မပြေနိုင်ပါဘူ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ခံစားချက် ကလေးတွေကို တော့ ချရေးချင်လို့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
မင်းကို လမ်းမှန်ကို ရောက်အောင်
သူခံစား ငိုကြွေးမှုတွေက ပိုများမယ့်သူဖြစ်တယ်။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/06/2013
“နောဧသည် မမြင်သေးသော အမှုအရာတို့ကို ဘော်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရပြီးမှ၊ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သော စိတ်ရှိ၍၊ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏။ ထိုသို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီ သားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုလည်း အမွေခံရ၏။” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)
ယနေ့ ဤကမ္ဘာလောကကြီးထဲတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ထက်မျက်သော လူများစွာ ရှိပါသည်။ အချို့ သည် ငွေကြေး ပြည့်စုံပြီး၊ အချို့ကမူ အရာရှိ၊ အရာခံများဖြစ်သောကြောင့် သြဇာအာဏာလည်း ထက်မြက်ကြ ပါသည်။ ထိုသူတုိ့၏ သားသမီးများသည် သူတို့၏ ဖခင်များအတွက် နေရာတိုင်းတွင် မျက်နှာရပြီူး ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတတ်ကြပါသည်။
သို့သော် အချို့မှာမူ ဆန့်ကျင်ဘက် အနေအထားဖြစ်သည်။ ဘခင်ဖြစ်သူက ရိုးသားဖြောင့်မက်မှုဖြင့် ကောင်းစွာ အသက်ရှင်သည်။ သူ၏ ရိုးသားဖြောင့်မက်မှုကို လူအချို့ အသိအမှတ်မပြုကြ။ “ဒီလူက စာအုပ်ကြီးအတိုင်း လုပ်နေတာ” “လူရိုး” “လူအ” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြသည်။ သူတို့၏ သားသမီးများမှာ ဘခင်ဖြစ်သူ၏ ရိုးသားမှု သည် သူတို့အတွက် ရှက်စရာ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။
နောဧ၏ အသက်တာမှ အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဤကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးတွင် ရှိသမျှသည် ဆိုးညစ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပြည့်လျက် ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေကို ကျမ်းစာက ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် “ပုပ်စပ်လျက် ရှိသည်” ဟုဖေါ်ပြပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ထူးခြားသောသူ တစ်ယောက်ရှိသည်။ သူသည် နောဧပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်မှာ
နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ မိမိအမျိုး၌ စုံလင်သောသူဖြစ်၏။ ဘုရားသခင် နှင့်အတူ သွားလာ၏။ (ကမ္ဘာ ၆း၉)
ဘုရားသခင်သည် နောဧကို တွေ့မြင်ပြီးနောက် ဘုရားသခင်က ဆိုးညစ်နေသော ဤကမ္ဘာလောကကြီးကို စီရင်မည်။ ထိုသို့ စီရင်ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး နောင်တရသောသူများကို ကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်က ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့အစီအစဉ်အတွက် နောဧကို ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ကာ သင်္ဘောကြီးတစ်စီးကို တည်ဆောက် ရန် နောဧကို တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ထိုသဘောင်္ပေါ်တွင် တိရစ္ဆာန်များကို ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ပေးသော အရေ အတွက်အတိုင်း တင်ဆောင်ရန် စီစဉ်ရသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၆း၁၃-၂၂)
ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်အတိုင်း နောဧ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူတွေက မည်သို့ထင်သည် မြင်သည် မည်သို့ ဝေဖန်သည်ကို ဂရုမစိုက်။ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများ ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း နောဧ၏ မိသားစုသည် နောဧ ၏ နောက်သို့ တစ်စိုက်မတ်မတ် လိုက်ခဲ့သည်။ ဘခင်ကြီး၏ မားမားမက်မက် ရပ်တည်မှုအပေါ်တွင် မိသားစုက အပြည့်အဝ ယုံကြည်မှုဖြင့် လိုက်ခဲ့သည်။ ထိုမျှမက ဘခင်ကြီးကို ကူညီမှုအပြည်အဝ ပေးခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဘခင်ကြီးနောဧ၏ ဦးဆောင်မှုကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘခင်ဖြစ်သူ၏ တည်ကြည်မှု၊ ဖြောင့်မက်မှုနှင့် ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျော်မှု တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိ၏ ဘခင်ကို မည်သို့ မြင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဝေဖန်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘခင်၏ စကားနှင့် ဘခင်၏ လုပ်ရပ်များကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တစ်အိမ်သားလုံး ကောင်းကြီး မင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်မျှ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့ မိသားစုသည် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခု လုံးတွင် သူတို့ မိသားစုသာ ရှိသဖြင့် ဤလောက ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရသည်အထိ ကောင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြ သည်။
မိမိတို့၏ သားသမီးများ ဆိုးသွမ်းနေခြင်းကို ပတ်ဝန်ကျင်ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု အပြစ်ပုံချတတ်သော ဘခင်များ ရှိကြသည်။ နောဧ၏ ခေတ်ကာလတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုးညစ်နေသည့်အချိန်တွင် မိမိ၏ မိသားစုကို နိုင်နင်းစွာ ဆုံးမသွန်သင်နိုင်သော ဘခင်ကြီးကို နောဧကို လေးစားမိသည်။ ယနေ့ ဘခင်များ သည် နောဧ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကို အတုယူရမည် ဖြစ်သည်။ ဘခင်တို့၏ အားနည်းချက်များကြောင့် မိသားစုများ မပျက်စီးပါစေနှင့်။ မိသားစုအတွက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သယ်ဆောင်နိုင်သော ဘခင်ကောင်း များ ဖြစ်စေရန် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပါ။ ဘခင်များ၏ ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျော်ခြင်းသည် သားသမီးများကို ကောင်းကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
နောဧ သင်္ဘော ဆောက်လုပ်စဉ်က ပတ်ဝန်းကျင်က ဟားတိုက်ရယ်မော လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပေမည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးကို ယနေ့ခေတ်တွင် ကြုံတွေ့ရသည် ဆိုပါက မိမိတို့၏ ဘခင်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ကာ ကိုယ့်ဘခင်နောက်သို့ လုံးဝ လိုက်နိုင်ပါမည်လား။ ကိုယ့်ဘခင်ကို ရှေ့တွင် မပြောရဲ သည့်တိုင် နောက် ကွယ်တွင် အကောင်းမမြင်၊ အပြစ်တာကာ “အဖိုးကြီး ကတော့ကွာ” “အဖေဖြစ်နေလို့ ပြောမရလို့သာ လိုက်နေရတာ၊ မလွယ်ပါဘူးကွာ” … စသည်ဖြင့် သင် ပြောနေပါသလား။ ထိုအခြေအနေ မျိုးတွင် ကိုယ့်ဘ ခင်ကို အော်ဟစ်ကာ ပြန်လည် တုန့်ပြန်သူ ဖြစ်နေမလား။ စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားပါ။
အထက်ပါ စဉ်းစားစရာ အချက်များကို ကိုယ့်အသက်တာတွင် အမှန်တကယ် ကြုံတွေ့နေရပါက မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကာ ယနေ့ပင် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင် အော်ဟစ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်လည် တည်ဆောက် ပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင် မိသားစု အဖြစ် ပြန်လည် တည်ဆောက်ပါ။ ဘုရားသခင် ထံက ကြီးမားသည့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ ရယူ ခံစားနိုင်သော ဘခင်နှင့် သားသမီးများ ဖြစ်ကြပါစေ။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 12/06/2013
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: ဖခင္.	Leaveacomment
သားသမီးကို သင်ရမယ့် အဖေ့တာဝန်အိုဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ငါတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် တဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိ သမျှနှင့် ချစ်လော့။ ယနေ့ငါမှာထားသော စကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။ ထိုစကားကို သင်၏ သားသမီး တို့အား ကြိုးစား၍ သွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ထိုင်လျက် နေသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီး၌ သွားသည်ဖြစ်စေ။ အိပ်လျက်။ ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုစကားကို ပြောရမည်။ ထိုစကားကိုလည်း သင်၏ လက်၌ လက္ခဏာ သက်သေဘို့ ရာ၎င်း၊ သင်၏ မျက်စိကြားမှာ သင်းကျစ်ကဲ့သို့၎င်း ချည်ထားရမည်။ အိမ်တံခါး၊မြို့တံခါးတို့၌လည်း ရေးထားရမည်။ (တရားဟော ၆း၎-၉)
သားသမီးဆိုတာ အဖေ့ရဲ့ ရတနာလေးတွေ
ဘွားမြင်သော သားသမီးတို့သည် ထာဝရဘုရားဆုချ၍ ပေးသနားတော်မူသော အမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ ၏။ အသက်ပျိုစဉ်၊ ဘွားမြင်သော သားသမီးတို့သည် သူရဲလက်၌ ရှိသော မြှားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ (ဆာလံ ၁၂၇း၃-၄)
ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ အဘသည် အလွန်ဝမ်း မြောက်လိမ့်မည်၊၊ ပညာရှိသောသားကို ဖြစ်ဘွားစေသောသူသည် ထိုသား၌ အားရဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ (သုတ္တံ ၂၃း၂၄)
ပညာရှိသောသားသည် အဘဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ မိုက် သော သားမူကား၊ အမိဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ (သုတ္တံ ၁၀း၁)
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့ လိုက်၍၊ သူ၏ သားစဉ် မြေးဆက်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏၊၊ (သုတ္တံ ၂၀း၇)
စည်းကမ်းနဲ့ ထားတဲ့ အဖေ
ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရား ဆုံးမတော်မူခြင်းကို မမှတ်ဘဲမနေနှင့်။ သင်၏ အပြစ်ကို စစ်ဆေး တော်မူသောအခါ စိတ်မပျက် စေနှင့်။ ထာဝရဘုရားသည် ချစ်တော် မူသောသူကို ဆုံးမတော် မူတတ်၏။ နှစ်သက် တော်မူသော သားကို ဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏။ (သုတ္တံ ၃း၁၁-၁၂)
သူငယ်ကို မဆုံးမဘဲ မနေနှင့်၊၊ ကြိမ်လုံးနှင့် ရိုက်သော်လည်း သူသည်မသေ၊၁၄ကြိမ်လုံးနှင့် ရိုက်၍ သူ၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို မရဏာနိုင်ငံမှ ကယ်နှုတ်ရမည်၊၊ (သုတ္တံ ၂၃း၁၃-၁၄)
သင့်ကို ဖြစ်ဘွားစေသော အဘ၏ စကားကို နားထောင်လော့၊၊ အသက်ကြီးသော အမိကို မထီမဲ့မြင် မပြုနှင့်၊၊ (သုတ္တံ ၂၃း၂၂)
အဖေ့ရဲ့ သက်သေခံချက်ကို ပြန်ပြောပါ။
ကိုယ်သားတို့အားပြောကြလော့။ သူတို့သည် သူတို့သားတို့အားပြောကြစေ။ သူတို့သားတို့သည်လည်း ဆက်နွှယ်သောအခြားသူတို့အား ပြောကြစေ။ (ယောလ ၁း၃)
အဖေ ဂရုစိုက်တဲ့ ကျမ်းပိုဒ်
အဘတို့၊ ကိုယ်သားသမီးကို စိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါ မပြုကြနှင့်၊ သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နှင့်ညီသော ဆုံးမသွန် သင်ခြင်း ကို ပြုလျက်ကျွေးမွေးကြလော့။ (ဧဖက် ၆း၎)
အဘတို့၊ ကိုယ်သားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါ မပြုကြနှင့်။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ သူတို့သည်အားလျော့ စိတ်ပျက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ (ကောလောသဲ ၃း၂၁)
ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဘုံဗိမာန်တော်၌ စံပယ်လျက် မိဘမရှိ သောသူတို့၏ အဘဖြစ်၍ မုတ်ဆိုးမ တို့ဘက်မှာ တရားစီရင်တော်မူ၏။ (ဆာလံ ၆၈း၅-၆)
အဘသည် သားတို့ကို သနားစုံမက်သည်နည်းတူ၊ ထာဝရဘုရားသည် ကြောက်ရွံ့သော သူတို့ကို သနားစုံမက်တော် မူ၏။ (ဆာလံ ၁၀၃း၁၃)
သားကလည်း၊ အဘ၊ အကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကို၎င်း ပြစ်မှားပါပြီ။ ယခုမှစ၍ ကိုယ်တော်၏သားဟူ၍ ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဟု ဆိုလျှင်၊ အဘက၊ မြတ်သောဝတ်လုံကိုယူခဲ့၍သူ့ကို ခြုံကြ၊ သူ၏လက်၌လက်စွပ်တန်ဆာကိုဆင်ကြ။ ခြေနင်း ကိုလည်း စီးစေကြ။ ဆူအောင် ကျွေးသော နွားကလေးကို ယူ၍သတ်ကြ။ သို့ပြီးမှငါတို့သည် စားကြကုန်အံ့။ ပျော်မွေ့ခြင်းကို ပြုကြကုန်အံ့။ ငါ့သားသည်အထက်ကသေ၏၊ ယခုရှင်ပြန်၏။ အထက်က ပျောက်၏၊ ယခုတွေ့ပြန် ၏ဟု အစေအပါတို့ကိုဆိုပြီးမှ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြ၏။ (လုကာ ၁၅း၂၁-၂၄)
သားသမီးတွေကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ထားချင်တဲ့ အဖေ
ထိုအခါ ငါက၊ မထိတ်လန့်ကြနှင့်၊ သူတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့ရှေ့မှာကြွတော်မူသော သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ မျက်မှောက်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌၄င်း၊ သင်တို့လိုက်လာသော လမ်းတ ရှောက်လုံး၊ ဤအရပ်တိုင်အောင် အဘသည် သားကိုချီပိုက်သကဲ့သို့၊ သင်တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုချီပိုက်တော်မှုသောကျေးဇူးတော်ကို ခံရာ တော၌၄င်း၊ သင်တို့အဘို့ ပြုတော်မူသကဲ့သို့၊ သင်တို့ဘက်၌ စက်ကူတော်မူမည် (တရားဟော ၁း၂၉-၃၁)
ကောင်းစားချင်ရင် မိဘကို ရိုသေ
သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးသနားတော်မူသော ပြည်၌ သင်၏ အသက်တာရှည်မည် အကြောင်း၊ သင်၏မိဘကိုရိုသေစွာ ပြုလော့။ (ထွက်မြောက်ရာ ၂၀း၁၂)
ဆုံးမတာကို မကြိုက်ရင် အဖေ့သားမဟုတ်
သင်တို့သည် ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျှင်၊ သားတို့ကိုပြုသကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ ကိုပြုတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အဘမဆုံးမသောသား တစုံတယောက်ရှိသလော။ ၈သားအပေါင်းတို့သည် ခံတတ်သော ဆုံးမခြင်းကို သင်တို့သည် မခံဘဲနေလျှင်၊ သားအရင်းမဟုတ်၊ မင်းဦးမင်းလွင်ရသော သားဖြစ်ကြ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၂း၇-၈)
ဖခင်များနေ့မှာ ဖခင်များကို ဂုဏ်ပြုပါ။
ဖခင်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝအသက်တာတွင် အရေးကြီးသော နေရာ အစိတ်အပိုင်းတွင် ရှိနေပါသည်။ ဖခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို လောကကြီးထဲတွင် ကောင်းစွာ အသက်ရှင်ရန် လမ်းပြသွန်သင်ပေးခဲ့သော ပထမဦးဆုံးသော လက်ဦးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဖခင်များသည် သားသမီးများအတွက် အမြဲတမ်း အနုတ်လက္ခဏာ ဘက်မှ နေကာ စဉ်းစားပေးတတ်သူမဟုတ်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ဘက်မှ နေကာ စဉ်းစားပေးတတ်သူ ဖြစ်သည်။
ဖခင်များသည် ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားမှ တောင့်တမှုများကို အမြဲတမ်း ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သူဖြစ်သည်။ ဖခင်သည် ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွင် အကောင်ဆုံးသော အဖော်မွန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖခင်များသည် သားသမီးများ၏ ဘဝတွင် အများဆုံး လွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ အစီအစဉ်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခါ တစ်ရံ မိခင်ဖြစ်သူမှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း ကလေးများအတွက် အမြဲ ဆောင်ရွက်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။
လောကတွင် ဖခင်မရှိဘဲ ကြီးပြင်းလာသူတွေ အများအပြား ရှိပါသည်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖခင်များ နှင့် ကြီးပြင်ခွင့် သူတို့၏ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် အသက်ရှင်ခွင့် ရသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကြီးမားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း နားလည် သင့်ပေသည်။ အချို့သောသူတို့သည် ဖခင် မရှိဘဲ လောကတွင် နေထိုင်ရသော်လည်း သူတို့သည် အမြဲတမ်း ဖခင်ကို တောင့်တ အသက်ရှင် နေတတ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အမြဲတမ်း ဖခင်များကို ရိုသေလေးစားသင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဘဝတွင် အကောင်းဆုံး နေရာများကို သူတို့အား ပေးသင့်ပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်တော်တို့ ဘဝထဲမှ အရာအားလုံးနှင့် ထိုက်တန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖခင်များကို ဂုဏ်ပြုပေးရန် ဖခင်များနေ့ ဆိုသည်မှာ မဖြစ်မနေ ရှိသင့်သော နေ့ရက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤနေ့သည် ကျွန်တော်တို့ ခံစားရသည့် နေ့ရက်များတွင် အလှပဆုံးသော နေ့တစ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့၏ ဖခင်အပေါ်တွင် ထားရှိသော နှလုံးသားနှင့် မေတ္တာ တရားကို ဖော်ကျူးခွင့်ရသည့် နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဖခင် အသက်ရှင် ထင်ရှား ရှိနေပါလျှင် ပြောခွင့်ရ နိုင်သေးသည်မှာ “အဖေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝမှာ အလွန် အရေးကြီးသောသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ထိုအခွင့်အရေး မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော့်ဖခင်မှာ ကျွန်တော် အသက် (၂၀) အရွယ်တွင် ဆုံးပါးသွား သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က ဖခင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်လောက် အရေးပါကြောင်း ကျွန်တော် မသိသေးသည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုကိစ္စအတွက် ဖခင်များနေ့ရောက်တိုင်း ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်မျိုးအဖြစ် ခံစားနေရပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖခင်ကို ဂုဏ်မပြုနိုင်သော်ငြားလည်း မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ယုံကြည်သူ ဓမ္မ မိတ်ဆွေများကိုမူကား ဖခင်ကို ဂုဏ်ပြုစကား ပြောစေချင်ပါသည်။ ဖခင်များနေ့သည် သင့်အတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပင် ဖခင်များနေ့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်၍ မိမိ ဖခင်ကို ဂုဏ်ပြုဖြစ်အောင် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါ ဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ဖခင်များနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 10/06/2013
နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ ဖခင်များနေ့ ဖြစ်တာကြောင့် ဖခင်များနေ့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးကို ဗဟုသုအနေဖြင့် မှတ်သားနိုင်စေဘို့ တတ်နိုင်သလောက် ရှာဖွေ စူစည်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၉၀၉ ခုနှစ် မှာ ကျင်းပတဲ့ မိခင်များနေ့မှာ သင်းအုပ်ဆရာက မိခင်များကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ တရားဒေသနာကို ဟောပြောနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Sonora Smart Dodd ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဖခင်ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့ နှလုံးသားဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်မှု အစီအစဉ် ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ သင်အုပ်ဆရာထံကို ချက်ချင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မိခင်များနေ့ ရှိသကဲ့သို့ ဖခင်များနေ့ကို သတ်မှတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုသင့်တဲ့အကြောင်း ပြောဆို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူမ ဖခင်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်လ (၅) ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်လိုကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်းအုပ်ဆရာက အဲဒီရက်မှာ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ချိန် အလွန်နည်းပါးနေလို့ တရားဟောချက် ပြင်ဆင်ဘို့ အချိန်ရအောင် ဂျွန်လ တတိယနေ့မှာ ပြုလုပ်ဘို့ အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ Mr William Jackson Smart ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှာ ပါဝင် စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ ဇနီးဟာ စောစောစီးစီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူဟာ နောက်အိမ်ထောင် မပြုတော့ဘဲ ကလေး (၆) ယေက်ကိုသာ ပြုစု ပျိုးထောင် သွန်သင် ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မေတ္တာကို အပြည့်အဝ ခံစားရတဲ့ Dodd ဟာ ဖခင်ကို ဂုဏ်ပြုဘို့သာ စိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒပြင်းပြနေပါတော့တယ်။
အဲဒီဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ဘို့ ကြိုးစားကာ စီပွားရေးသမားများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ အသင်းတော် ခေါင်းဆောင် များကို ချဉ်းကပ်ကာ နိုင်ငံတော် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစား အားထုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၁၀ ခုနှစ် ဂျွန်လ တတိယပတ်မှာ ဖခင်များနေ့ အခန်းအနားကို ဝါရှင်တန် မြို့တော်ကြီးမှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ဝါရှင်တန်မှာသာမက အခြားပြည်နယ်များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း ပြန့်နှံ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာ တော့ အများပြည်သူ အားလပ်ရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ကွန်ဂရက်မှာ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်အထိ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ နေ့ရက်တွေက မတူညီဘဲ ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် အစဉ်ပြေသလိုသာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်မှာ သမ္မတ Woodrow Wilson က ဖခင်များနေ့ ကျင်းပတဲ့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ပြီး အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အသိအမှတ်ပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ဂရက်က အဲဒီကိစ္စကို သဘောမတူညီခဲ့ဘဲ ပယ်ချခဲ့တာကြောင့် တစ်ဖန် ပြန်လည်ပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတော် အသိအမှတ်ပြု နေ့ရက် အဖြစ် သမ္မတ Calvin Coolidge ကြော်ငြာပေး ခဲ့တာ ကတော့ ၁၉၂၄ ခုနှစ် ရောက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲဒီလို ကြော်ငြာပေးခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်တစ်ကယ် အတည်ဖြစ်သွားခဲ့တာကတော့ ၁၉၆၆ ခုနှစ် ရောက်တဲ့အခါမှ သမ္မတကြီး Lyndon B. Johnson က နှစ်စဉ် ဇွန်လ၏ တတိယပတ် စနေနေ့နေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကျင်းပရန် သတ်မှတ်လိုက်လေတော့သည်။ အဲဒီလို သမ္မတက နိုင်ငံတော် အစီအစဉ်နဲ့ နှစ်စဉ် ကျင်းပဘို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာတောင် တော်တော်ကြာမှ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အတည်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာဘို့ နောက်ထပ် (၆) နှစ် ထပ်မံ အချိန်ယူရပြန်ပါတယ်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် သမ္မတ Richard Nixon လက်ထက်ရောက်မှ လက်မှတ်ထိုးတာကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖခင်များနေ့အဖြစ် အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် အခြားနိုင်ငံများကလည်း ထိုအစီအစဉ်ကို သဘောကျ နှစ်ချိုက်ပြီး လိုက်လံ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ နေ့ရက်များမှာ မတူညီကြပါဘူး။ အများစု ကျင်းပကြတဲ့ နေ့ရက်ကတော့ ဇွန်လ၏ တတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်များနေ့ကို ကျင်းပဘို့ ဦးစွာ လှုံ့ဆော်မှုပြုခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး Sonora Smart Dodd ဟာ ချီကာဂိုမြို့မှာ ရှိတဲ့ အနုပညာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားခြဲု့ပီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ် အရောက်မှာတော့ အသက် (၉၄) အရွယ်မှာ ကောင်းကင်ဘုံကို ဝင်စားသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဤစာမျက်နှာကို အောက်ပါ website များကို အခြေပြုပြီး သင့်လျှော်သလို အကျဉ်းချုပ် စီစဉ်ကာ ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးပါသည်။
““သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့အား ငါ့တပည့် ဖြစ်စေလျက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသာ ၀ိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ်္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တို့အားပေးသမျှသော ပညတ်တော် တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမသြ၀ါဒပေး ကြလော့။ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ်္ဘာကုန်သည့်တိုင် အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏””(မဿဲ ၂၈း၂၉-၃၀)။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ယေရှု လောကတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ် ခမည်းတော်က မိမိအား စေခိုင်း ထားသော တာဝန်များကို အတူတကွ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော တပည့်တော်တို့အား သူမရှိသောအခါတွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် မိန့်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤ မိန့်မှာချက်သည် ရှေးဦး ယုံကြည်သူများ အတွက်သာ မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ (၂၁) ရာစုတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသော ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကယ်တင် ခြင်းအမှုကို ယုံကြည် လက်ခံကြ ကုန်သော ယုံ ကြည်သူတိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင် နေဆဲဖြစ် သည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ (၂၁) ရာစု ယုံကြည်သူ အယောက်စီတိုင်းသည် သခင်ယေရှု တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့သော တစ်နည်း အားဖြင့် သခင်ယေရှု လုပ် ဆောင်ခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်း အရာများကို မိမိလက်ခံ ယုံကြည်ရုံမျှ မဟုတ်ဘဲ မိမိနှင့်ထိတွေ့သော လူသားတိုင်းကို ဆက်လက် ဝေငှရန် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဤသည်ကား ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် သူတိုင်းအား ဘုရားပေး အပ်ထားသော တာဝန် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်း အတွက် ဘုရားသခင် ၏ အမိန့်တော်ဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးတည်း ကယ်တင်ခြင်းကို အတ်္တကြီးစွာဖြင့် မိမိအတွက်သာ သိမ်းဆည်း မထားပါနှင့်။ ဤ ကယ်တင်ခြင်း အလင်းတရားကို တစ်ပါးသူတို့ ဆက်လက်ဝေငှရန် အတွက် မိမိအသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံ၍ လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်တန် နေပြီဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို မခံစားရဘဲ ဤလောကကြီးမှ ထွက်ခွာသွားရသူ ဒုနှင့်ဒေး ရှိနေပါသည်။ ထိုသူတို့ ၏ အသက် ၀ိညာဉ် ကယ်တင်ခြင်း ခံစားရရန် အတွက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာကို သူနှင့်နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် အလိုရှိနေ ပါသည်။
ဆရာ ယုဒဿန်သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို နက်ရှိုင်းစွာ သိရှိ ခံစားခဲ့ရ ပြီးသည့်နောက် ဘုရားရှင် စေခိုင်းတော် မူသော အမှုတော် အတွက် မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား အယောက်စီတိုင်း ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်နှင့် အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံစားရရှိရန် အတွက် ဆက်ကပ်အ သက်ရှင် ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ခံစားရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဆရာယုဒဿန်၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးသော ကာလသည် တရွေ့ရွေ့နီးကပ် လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ မိတ်ဆွေ ယုံကြည် ရုံနဲ့တင် မိမိအသက်တာကို စိတ်ကြိုက်မောင်းနှင် အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင် ဘုရားပေးသောတာ ၀န်ကို ဥပေက္ခာ ပြုနေသော၊ တာဝန်မဲ့စွာ အသက် ရှင်နေသော၊ ဘုရား၏ကောင်းကြီးကို အတ္တ ကြီးစွာ ခံစား အသက်ရှင်နေသော၊ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်၌ အသက်ရှင်နေသော်လည်း တာဝန် မဲ့စွာ အသက်ရှင်နေသော ယုံကြည်သူတစ်ယောက် သက်သက်သာ ဖြစ်နေ ပါမည်။
မိတ်ဆွေ ဘုရားရှင် ပေးအပ်သော တာဝန်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း သင်တစ်ဦးတည်း လုပ်ဆောင်နေရမည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် အတူလုပ်ဆောင်ပေး နေမည်ဖြစ် ကြောင်း နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် ကတိထားရှိ ပါသည်။ ကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သည့်တိုင်အောင် ဖြစ်ပါ သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ အမှုတော်မြတ် အကြံအစည်တော် အတွက် ယုံကြည်သူတိုင်း ပါဝင် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒ တော် ရှိသည့် အတိုင်း ထိုအမိန့်တော် မြတ်ကို နာခံ လိုသော ယုံကြည်သူများ၏ နှလုံးသား များကိုလည်း စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။
ယုံကြည်သူ မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန်ရန် အချိန်သည် ယခုပင် ရောက်နေပြီ။ စဉ်းစားပါ မိတ်ဆွေ။ ယုံကြည်ရုံပဲ အသက်ရှင် နေထိုင် သွားမှာလား.. ကိုယ်တော်ကို ချစ်ကြောင်း၊ နာခံ ကြောင်းကို ဘုရားပေးတဲ့ တာဝန်ကို လက်ခံပြီး တုံ့ ပြန်ရင်း အစေခံ အသက်ရှင်မှာလား..။
ကိုယ်တော် (ခရစ်တော်) ကတော့ သူချစ် တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ တုံ့ပြန်တဲ့ နှလုံးသားကို စောင့်စားရင်း သူနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ စောင့် စား မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက် စိန်ခေါ်သံမှ တဆင့် စိန်ခေါ်လိုက်ပါရစေ..။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လထုပ် စိန်ခေါ်သံမဂ္ဂဇင်းမှ ဆရာ ပေါလ်ဇံ၏ ရေးသားချက်ကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/06/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: တရားေဟာခ်က္.	Leaveacomment
ဒီရက်ပိုင်းအတွင် အလုပ်များနေတာကြောင့် စာရေးဘို့ ပျက်ကွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီဘလောဂ်ကလေးကို အစဉ်အားပေး လာရောဖတ်ရှုတဲ့ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေကို အရမ်းအားနာမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာမရေးနိုင်ပေးမဲ့ နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ ခွန်အားယူနိုင်ဘို့ MP3 တရားဟောချက်ကလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ Handphone နဲ့ MP3 ပလေးယာ လေးတွေထဲမှာ ထဲ့ပြီး ဘစ်ကား စီးတဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ၊ သွားလာရင်း နာထောင်နိုင်ဘို့ တရားဟောချက်ကလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတရားဟောချက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကိုးမိုင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော် မှာ ဝေငှတဲ့ တရားဟောချက် များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း အကြာကြီး ဆွဲစရာ မလိုအောင် ဖိုင်ဆိုက် သေးသေးလေး ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက် နှေးကွေးတဲ့ နေရာမှာတောင် ပြဿနာ မရှိအောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။
အားလုံးကျေနပ် ခွန်အားရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
Rev. Dr ပေါလ်ခေကျိုင်း၏ တရားဟောချက်
ဆရာ ဇော်ကိုမိုင်၏ တရားဟောချက်
Rev. မင်းလွင် ၏ တရားဟောချက်